Just In: “Mnangangwa urged to resign” after Winky D publicly referred to Zimbabwe as a jail
Hopeless Zimbabweans have called for President Emmerson Dambudzo Mnangagwa to resign and allow someone who is able to lead, take the helm of office.
ED Mnangangwa whose watched his rein face unimaginable failure& socioeconomic suffering& decadency in just under 2 years remains optimistic. Zimbabweans have lost hope in his leadership & it has only become a partisan leadership.
Various groups believe it’s now time for a female leader to take the helm, whose heart& soul is for the people.
President Cde Mnangangwa is controversially linked to bloodshed events in Zimbabwean history after the liberation struggle, including the recent 1 August killings, Gukurahundi, 2008 Political violence.
His nickname Crocodile doesn’t make his “soft as wool” statement any true or make him any less feared by the masses, but the struggles have began a serious outcry
Popular musician Winky D DiBigman has referred to Zimbabwe as a prison and ED Mnangangwa and ZANU PF Party as the jailer.